ढलमा रोलेक्स भेटेपछि… – Sourya Online
ढलमा रोलेक्स भेटेपछि…
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ९ गते १३:०० मा प्रकाशित
लन्डन, ८ फागुन । तपाईंले २५ लाख रुपैयाँ (२१ हजार पाउन्ड) भन्दा बढी मूल्यको सामान ढलमा खसेको देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? सुटुक्क टिपेर गोजीमा हाली सरासर हिँड्नुुहुँदो हो ! बेलायतको पर्यटकीय क्षेत्र ‘साउथइन्ड–अन–सी’ मा ढल सफा गर्ने काम गर्दै आएका अरोन लार्जले दश दिनअघि यस्तै महँगो वस्तु फेला पारे । ढल सफा गर्दागर्दै उनले २१ हजार पाउन्ड पर्ने रोलेक्स घडी फेला पारे । फेला परेको बहुमूल्य वास्तु प्रहरीको जिम्मा लगाएर उनले सबैलाई चकित बनाएका छन् ।
घडी भेट्दाको क्षण सम्झिँदै २८ वर्षीय अरोनले भने, ‘यसअघि पनि ढलमा नक्कली सुन धेरैपटक फेला पारेको थिएँ । त्यसैले रोलेक्स घडी फेला पर्दा म त्यति उत्साहित भइनँ ।’ घडीमा लागेको फोहोर पुछ्दा पनि त्यसको सतहबाट सुनको लेपन नमेटिएपछि घडी बहुमूल्य रहेको निष्कर्षमा आफू पुगेको उनले बताए ।
लगत्तै उनले प्रहरीलाई खबर गरे र घडी जिम्मा लगाए । तीस दिनसम्म घडी मालिकले प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क नगरे बेलायतको कानुनअनुसार घडी अरोनलाई नै फिर्ता गरिनेछ । ‘घडी मालिक सम्पर्कमा आए धेरै राम्रो, यदि आएनछन् भने बेचेर ऋण तिर्ने सोच बनाएको छु,’ उनले भने ।
उनले फेला पारेको घडी १८ क्यारेटको सक्कली सुन रहेको पुष्टि भइसकेको छ । सो घडी चोरी भएको अथवा हराएको रिपोर्ट प्रहरीमा परेको छैन । संयोग नै मान्नुपर्छ, ब्रिटिस पत्रपत्रिकामा उनको इमान्दारीको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनले थप स्याबासी पाएका छन् ।
रोलेक्स घडी फेला पारेको केही दिनपछि ढल सफा गर्ने क्रममा उनले फ्रेङ्क मुलर र ओमेगाजस्ता बहुमूल्य घडी पनि फेला पारे । दुवै घडी उनले फेरि प्रहरीकै जिम्मा लगाए । ‘फेरि घडी फेला पारेपछि मैले एकजना साथीसँग ‘मैले फेला पारेको चिज देख्यौ भने पत्याउँदैनौंँ होला’ भने । मैले उसलाई भेटिएको दुइटा घडी देखाएपछि ऊ तीनछक प¥यो,’ मख्ख पर्दै अरोनले भने ।